မြန်မာနိုင်ငံရှိ Honda မော်တော်ကားများ များ | Ads.com.mm
မြန်မာနိုင်ငံရှိ honda မော်တော်ကားများ
Honda Fit Shuttle 2011 မော်တော်ကားများ, မင်္ဂလာတောင်ညွန့်
199.00 LKs မတ် 06, 15:03
Honda Insight 2010Model မော်တော်ကားများ, လှိုင်သာယာ
183.00 LKs ဖေဖော်ဝါရီ 19, 16:12
2012 Honda Fit Shuttle Hybrid, ရန်ကုန်လိုင်စင် မော်တော်ကားများ, လမ်းမတော်
300.00 LKs ဖေဖော်ဝါရီ 14, 12:17
Honda Fit Ge6မော်တော်ကားများ, ရန်ကုန်
162.00 LKs ဖေဖော်ဝါရီ 07, 11:30
သင့်ရဲ့ကားအဟောင်းကို အသုံးပြုပြီးအဆင့်မြင့်ဟွန်ဒါကားတစ်စီးနဲ့လဲလှယ်လိုပါသလား? Ads.com.mm တွင် သင့်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ် ဟွန်ဒါ၊ တိုယိုတာ၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ နှင့် အော်ဒီကဲ့သို့ကားများကိုရောင်းချရန် ကြော်ငြာထောင်ပေါင်းများစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သောကားအမျိုးအစားတစ်စီးကို သင့်အနေ ဖြင့်သဘောကျနှစ်ခြိုက်နိုင်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ရှာဖွေဝယ်ယူပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်နောက် ပိုင်းနှင့် အကျော်ကို ကားအသစ်တစ်စီးအားမောင်းနှင်ကာ စတိုင်ဖြင့်ကျော်ဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာများကိုတင်ရန်နှင့် ရှာဖွေရန် လွယ်ကူပြီး အခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်ခနှင့်ကြော်ငြာခတို့ကိုပေးဆောင်ရန်မလိုပဲ လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ကုန်ပစ္စည်း၏မူရင်းတန်ဖိုးအတိုင်း ပေးချေ၊ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဟွန်ဒါအနေဖြင့် ကားဒီဇိုင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစွမ်းဆောင်ချက်များ၊ အင်ဂျင်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မောင်းနှင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များတွင် သာလွန်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တို့ကြောင့် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကြာ မျှကို ထိပ်တန်းဝင်ကားထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ အစဦးပိုင်းတွင် အတွင်းပေါက်ကွဲအင်ဂျင် အမျိုးအစားများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Sport ကားများမှစကာ၊ ယုံကြည် စိတ်ချရသော Civic နှင့် Fit ကဲ့သို့ နေ့စဉ်သုံးကားများနှင့် လမ်းကြမ်းမောင်းနှင်ရန်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော လေးဘီးယက်ကားများကိုပါထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးကားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု အဖြစ်ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ လူကြိုက်အများဆုံးဟွန်ဒါကားများအားအတန်ဆုံးရောင်းချမှုကို ရှာဖွေဝယ်ယူပါ
ကားဒီဇိုင်းနှင့် အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုတို့တွင်ရှေးဦးစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့် ဟွန်ဒါအနေဖြင့် ချပြရန်အတွက် နာမည်ကြီးကား မော်ဒယ်ပေါင်းများစွာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ၎င်းတို့အတွင်းမှ မော်ဒယ်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို လမ်းမများပေါ်တွင် မူရင်းအချက်အလက်နှင့်ပြင်ဆင်မှုများဖြင့် အတူ ယနေ့တိုင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ဈေးအတန်ဆုံးရောင်းဝယ်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကားအသစ်အတွက်အခြားဝယ်ယူတပ်ဆင်ရန် အပိုငွေထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏မြို့အတွင်းရှိ သာမာန်ကားများအပါအဝင် ငွေကြေးအကုန်အကျခံနိုင်မှုအမျိုးမျိုးတို့နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသော မော်ဒယ်များဖြစ်သည့်:
Fit:ရန်ကုန်မြို့တော်၏ လမ်းများပေါ်တွင်များစွာတွေ့ရသောကားအမျိုးအစားများ ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟွန်ဒါ Fit ကားမှာ မော်တော်ယာဉ်များသွားလာမှုများပြားသောလမ်းကြောများအတွက် အလွန်သင့်လျော်သော သေးသွယ်ကျစ်လစ်သည့်ဒီဇိုင်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး ကားကိုပါကင်ထိုးရန် အတွက် လည်းနေရာအနည်းကျဉ်းမျှသာယူသည်။ ဤတံခါးလေးပေါက် Hatchback အမျိုးအစားကားသည်ဆီစားလည်း သက်သာပြီး သာလွန်သောကုန်စည်ဆန့်ဝင်မှုနှင့် အလွယ်တကူပုံစံပြောင်းလဲနိုင်သော နောက်ထိုင်ခုံပါဝင်မှု စသော အခြားထူးခြားချက်များလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
Civic:၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ချိန်မှ စတင်ပြီး နာမည်ကြီးကား သေးအမျိုးအစားများထဲတွင်တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟွန်ဒါ Civic ကားများမှာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း နှင့် စိတ်ချယုံကြည်ရမှုတို့ကြောင့် အဓိကနာမည်ရလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြေပြစ်စွာတည်ဆောက်ထားသောကိုယ် ထည်ဒီဇိုင်းကလည်း ငယ်ရွယ်သောကားမောင်းသမားများကိုဆွဲဆောင်လျှက်ရှိပြီး နောက်ဆုံးထွက်ဒီဇိုင်းမော်ဒ ယ်များမှာ Sport ကားအမျိုးအစားဆန်လာသည်။ ဤကားမှာ ငယ်ရွယ်ဖျတ်လတ်တက်ကြွသော ယာဉ်ကိုမှ မောင်းနှင်လိုသူများအတွက် ဝယ်ယူသင့်သောကားတစ်စီးဖြစ်သည်။
Insight: Hybrid ကားအမျိုးအစားများတွင် မည်သည့်ဆီမှာမှမတွေ့နိုင်သော ဈေးအသက်သာဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းကား၏ တံခါးလေးပေါက် Hatchback ဒီဇိုင်းမှာ ကုန်ပစ္စည်းကို အတော်အသင့်သယ်ဆောင်နိုင်စေသလို တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အနည်းငယ်ကျဉ်းသယောင်ရှိသော်လည်း အဆင်ပြေသော နောက်ခန်းတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဟွန်ဒါ Insight အမျိုးအစားမှာ ရိုးရှင်းသော် လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်ဒီဇိုင်းကိုယ်ထည်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် မိသားစုများမှ ပိုမိုစိတ်ဝင်စား ကြသည်။
လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ပဲ ရောင်းချင်ဝယ်ချင်ပါသလား? Ads.com.mm မှရှာဖွေဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သင်လိုချင်သောကား ကိုရှာ၊ ရောင်းသူဆီဆက်သွယ်၊ ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်ပြီး ကားအသစ်တစ်စီး အတွက်သော့တစ်စုံကို အလျင်အမြန်ဆုံးလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အမြဲတက်နေတဲ့ ကားကြော်ငြာအသစ်တွေထဲကမှ သင်လိုချင်တဲ့ Honda နှင့် အခြားတန်းမြင့် ကားအဟောင်းများကို အလွန်တရာတန်လှတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။ ကားအရောင်းပြခန်းများနှင့်ပွဲစားများကိုဖြတ်ချလိုက်ပြီး အရောင်းအဝယ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အချိန်နှင့်အပိုငွေကြေးကုန်ကျမှုသက်သာခြင်းကိုဖြတ်ချလိုက်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကားတစ်စီးကို အွန်လိုင်းမှဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါက အန္တရာယ်အကင်းရှင်းဆုံးနှင့် အရှုပ်အရှင်းအကင်းဆုံးရောင်းဝယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက် အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာ ရန်လိုအပ်ပါသည်:
တစ်ဦးတစ်ယောက်မှရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက ပိုင်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောပါ။ ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့်တစ်ခု ဆီမှတစ်ဆင့်ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါက အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုလေ့လာဆန်းစစ်ပြီး အမှန်အကန်လုပ် ငန်းလုပ်ဆောင်သူ ဟုတ်၊မဟုတ်သိပါစေ။
မိုင်တိုင်နှင့် ဒိုင်ခွက်များကဲ့သို့ အသေးစိတ်လေးများကအစစစ်ဆေးပါ။ သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါမော်တော် ယာဉ်၏ သမိုင်းကြောင်းကိုရနိုင်သလောက်မှစကာ ယနေ့ချိန်အထိမေးမြန်းစုံစမ်းပါ။
အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်တိုင်း စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုဖြစ်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါ။ စကားဖြင့်ပြောဆိုကတိ ပေးခြင်းမှာမပြည့်စုံသဖြင့် သင့်ဘက်မှ ဝယ်ယူထားကြောင်းသက်သေအဖြစ် စာရွက်စာတမ်းကိုရရှိအောင်လုပ် ဆောင်ပါ။
ဈေးနှုန်းအနေဖြင့်လည်းတန်သင့်ကြောင်း ဟုတ်၊မဟုတ်လေ့လာပါ။ သင့်အနေဖြင့်ဝယ်ယူမည့်ကားအသစ် စက်စက်တစ်စီးအကြောင်းကို လေ့လာဖတ်ကြားထားခြင်းဖြင့် ချို့ယွင်းချက်များရှိပါက ဈေးအနည်းငယ်လျော့ ပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကားအကြောင်းကိုနားလည်တတ်ကျွမ်းထားခြင်းဖြင့် မတန်တဆဈေးများ ဖြင့်ရောင်းချထားသော ကြော်ငြာများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ကြော်ငြာများကိုလည်း လွယ်လွယ်ကူကူသတိထား ရှောင်ရှားစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Ads.com.mm တွင် သင့်အနေဖြင့် ကားအဟောင်းများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နေ့တိုင်းတင်နေသော ကားကြော်ငြာအသစ်များရှိနေသဖြင့် သင်၏ကားအရောင်းကြော်ငြာကိုအခြားသူများ နှင့်မတူပဲ တမူထူးခြားစေနေရန်အတွက် ရေးသားကြော်ငြာသင့်သည်။ မှန်ကန်တိကျသော စကားလုံးအသုံး အနှုန်းများကို အသုံးပြုပြီး သင့်တင့်မျှတသောဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ရောင်းချဖူးခြင်းဖြစ်နေပါက သင့်အနေဖြင့်ဈေးကောင်းရရှိရန်အတွက်အောက်ပါလမ်းညွှန် ချက်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာစေလိုသည်:
ရိုးသားပွင့်လင်းပါ။ သင့်ကားရဲ့ ထိခိုက်မှုများနှင့် အခြားပြဿနာများကိုမဖုံးကွယ်ပါနှင့်။ ဝယ်ယူသူ အနေဖြင့် ကားကို မလွှဲမရှောင်သာစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် အစဦးစွာကတည်းအမှန်အတိုင်း ပွင့်လင်း စွာပြောပြထားပါက အကောင်းမွန်ဆုံးပင်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံများနိုင်သမျှများများတင်ပါ။ ဓာတ်ပုံများကို အားသာချက်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုပြီး အရေးကြီးနေ ရာနှင့် အချက်များဖြစ်သော ကားအတွင်းပိုင်း၊အပြင်ပိုင်းနှင့် တစ်စီးလုံးကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရိုက်ထားသောပုံ တို့ထည့်ပါ။
တိကျရှင်းလင်းသောအချက်အလက်များဖြင့် ပါဝင်သည်ပစ္စည်းများကိုဖော်ပြတတ်သည်။ မမှန်ကန်သော မတိကျသော အချက်အလက်များသင်၏ကြော်ငြာတွင်မပါဝင်သင့်ပါ။ အမှန်တကယ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ် သည့်အခါတွင် ဝယ်ယူသူဘက်မှ စက်ပြင်ကျွမ်းကျင်သူခေါ်ဆောင်လာနိုင်ချေများသည်။